PSJTV | 'औषधिसहित पुगेकालाई किन गाली गर्ने?'
'औषधिसहित पुगेकालाई किन गाली गर्ने?'
काठमाडौं: प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बारा र पर्सा जिल्लामा विपद्का बेला सहयोग गर्न पुगेकालाई रमिते भन्न नसुहाउने बताएका छन्। आज रिपोर्टस् क्लबमा पत्रकारहरुको प्रश्नमा मुख्यमन्त्री राउतले भने, 'सहयोग गर्न गएकाहरुलाई रमिता हेर्न गएका नभनौ।
विचराहरु काठमाडौंदेखि सहयोग लिएर आउनु भएको छ। औषधि लिएर भोलेन्टियर गर्नु भएको छ। सबैको सहयोग छ। सहयोगी हातलाई रमिता हेर्न गएको भन्नु गाली गरेजस्तै हो। म त धन्यवाद दिन्छु उहाँहरुलाई।'
विपद्मा केन्द्र सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्मको सहयोग रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले भने, ' केन्द्र प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहयोग गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री, सेना, प्रहरी जनता सबैले सहयोग गर्नुभयो। अझै सहयोगको खाँचो छ।'
मुख्यमन्त्री राउतले घाइतेको सम्पूर्ण उपचार खर्च ब्यहोर्ने र पुनर्वासका लागि अन्तरिक मामिला मन्त्रीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको जानकारी दिए। एकद्वार प्रणालीबारे सोधिएको प्रश्नमा राउतले भने, एकद्वारको प्रयासमा छौ। सबैलाई पीडितसामु पुग्ने रहर हुन्छ। यो बेला टाइड गर्न गाह्रो हुन्छ।'
हुरीले अचम्मको अवस्था सिर्जना गरिदिएको उल्लेख गर्दै यसमा सबैको सहयोगले सहज हुँदै गएको बताए । धर्म प्रचारको बारेमा सोधिएको प्रश्नको जवाफमा मुख्यमन्त्री राउतले भने, 'उहाँहरु सेवा गर्न जानुभएको हो धर्म प्रचार गर्न गएको हैन भन्ठान्छु म।'